Afarta Isgaarsiin ee Ku Dhaqanka Wanaagsan ee Bilowga Tech | Martech Zone
Afarta Isgaarsiinta ee Ku Dhaqanka Wanaagsan ee Bilowga Tech
Khamiis, Janaayo 6, 2011 Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Adam Yar
Ku darista wax yar oo gudaha iyo dibaddaba ah isgaarsiinta dhaqanka ugu fiican waxay siin doontaa aasaas adag koritaanka mustaqbalka.
Aqoonsiga qiimaha Xiriirka Dadweynaha - Ereyga afka iyo tifaftirka ayaa dhaliya xiise waxayna qayb muhiim ah ka yihiin wacdinta iibsadayaasha tikniyoolajiyadda maanta. Laakiin barnaamijka PR ee soo jireenka ah wuxuu marin u leeyahay falanqeeyayaasha iyo tifaftirayaasha kuwaas oo leh dhagaystayaal diyaar u ah oo daacad ah. Marka tifaftiraha uu tifaftiro ama ku qoro maqaal shirkaddaada, waxaa jiri kara kumanaan ilaa tobanaan kun oo daawan doona. Falanqeeyayaasha warshadaha iyo tifaftirayaasha sidoo kale waxay leeyihiin sumcad ah inay noqdaan khubaro ujeeddo leh. Haysashada oggolaanshaha dhinac saddexaad ee xalkaaga ayaa xambaarsan culeys ka badan is-oggolaansho. Ka qaybgal lataliye saxaafadeed oo khibrad u leh qaybta wax soo saarkaaga. Ka faa'iideyso waaya-aragnimadooda isla markaana u soo bandhig khabiirada daboolaya alaabada la midka ah taada. Saameynta saameynayaashan cusbooneysiinta ku saabsan kala-goynta suuqa, hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda iyo farriinta la xiriirta isbedelada warshadaha. Ku dadaal inaad dhisato xiriirro waqti dheer ah oo aad la yeelato saxaafadda oo aad faham ka hesho waxa ay u baahan yihiin si loo soo saaro nuxurka daabacaadda.
Tijaabi fariintaada shirkadaha ka soo horjeedka aragtida dibedda iyo cilmi baarista - Ha yeelin koolaid cab oo si indho la’aan ah u aqbal aragtidaada maamulka adduunka. Aqbalida hadalada gudaha ee balan qaadaya in sheygaagu noqonayo "kan uguhoreeya, ugudhala, kan ugu fiican, macaamiishana ay saf ugu jiraan inay iibsadaan" waxay u egtahay inaysan la jaan qaadi doonin xaqiiqda waana in la tijaabiyo In kasta oo qiyaas caafimaad oo yididiilo leh ay tahay waxa suuqgeyntu ku saabsan tahay, ha iska indha tirin waxa kale ee ka dhacaya suuqa. Daacad noqo. Haddii aadan ahayn kii ugu fiicnaa uguna fiicnaa - taas ha ku dhisin garoonkaaga dahabka ah. (Sidoo kale ereyga digniinta ah: Ka taxaddar inaadan adeegsan ereyo aad u tiro badan iyo ereyo xuruuf leh.) Xaddid isbadallada - gudaha iyo dibaddaba. Xabad-joojin kuma sameyso farriintaada falanqeeyayaasha warshadaha iyo khubarada aqoonta u leh tartankaaga iyo suuqa aad ku ciyaareyso. Wax soo saar kasta ama adeeg kasta wuxuu leeyahay tartame nooc ka mid ah - shirkaddu hoggaamiye kama noqon karto qeyb ka mid ah. Maareynta loolanka si loo soo saaro xaqiiqooyin, sahanno iyo saadaalinno lagu taageerayo jiritaanka khariidadda wax soo saarka. Hadafka guud waa in shirkaddu guuleysato.
Ku dhiirigeli isgaarsiinta ka dhexeysa kooxaha farsamada iyo ganacsiga ee ururkaaga - Kheyraadka bilowga ah waa kala fidsan yihiin laakiin iska ilaali jahwareerka inaad ka soocdo kooxdaada horumarinta wax soo saarka dadka (sida caadiga ah iibka iyo suuqgeynta) ee la hadlaya macaamiishaada mustaqbalka. Soosaarayaasha farsamada mararka qaarkood waxay galaan hormarinta tikniyoolajiyadda “qabow” iyadoon la xaqiijin in gizmo-ga ugu dambeeya uu yahay wax qof doonayo inuu ku bixiyo. Farsamayaqaannada farsamooyinka ku soo saara alaabada meel bannaan oo aan diiradda la saarin shuruudaha suuqa iyo fursadaha waxay u badan tahay inay soo saaraan wax soo saar aan shirkadda u daah furi doonin sidii la filayay. Ku dhiirrigeli jawaab celinta iibka iyo suuqgeynta kooxda horumarka isla markaana la soco isbeddellada warshadaha si ay ula jaanqaadaan khariidadda wax soo saarka iyo shuruudaha mustaqbalka.
Qalabaynta shaqaalaha qalabka saxda ah ee loogu baahan yahay inay si wax ku ool ah ula xiriiraan da'da elektaroonigga ah - Xiriirka wax ku oolka ah wuxuu u baahan yahay wax ka badan taleefanka gacanta iyo koontada emaylka. Shirkaduhu waa inay dejiyaan siyaasado iyo halbeegyo kulamada elektarooniga ah, fariimaha deg dega ah iyo khadadka shirarka. Qalabaynta shaqaalaha softiweer iyo qalab ee looga baahan yahay isgaarsiinta bilaa sumad ahaanta ah waxay shaqaalaha ka dhigeysaa inay la jaan qaadaan oo ay wax soo saar yeeshaan Isticmaalka xirmada barnaamijka kulanka elektarooniga ah (oo ay kuxirantahay macluumaadka galitaanka) waxay ubaahantahay in laheli karo dhamaan jadwalka kulamada. Khadadka shirarka iyo ereyada sirta ah ee laxiriira waa in la yaqaan oo ay kujiraan khadadka maxaliga ah ee wadamada sida joogtada ah loogu daro. Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan waxaa loo baahan yahay in lagu keydiyo dijitaal halkaas oo shaqaaluhu ku dhejin karaan isgaarsiinta gudaha sida tusaha shirkadaha oo ay ku jiraan habka isgaarsiinta dhinac saddexaad iyo lambarrada unugyada. U deji heerar iyo tilmaamo isgaarsiinta gudaha iyo dibaddaba. Waxaad ubaahantahay wicitaanada taleefanka in lasoo celiyo iyo emayllada oo lagajawaabto iyadoo qeyb ka ah siyaasada masuuliyada.
Ku darista dhaqamadaan isgaarsiinta ee ugu fiican bilaabista tikniyoolajiyadaada ayaa kaa caawin doonta inaad xaqiijiso guusha marka kooxdaada ay koraan oo ay la kulmaan caqabadaha u wareejinta fikradaha iyo wax soo saarka cusub suuqa.
Hal-abuurnimada Suuqgeynta Jim Irsay
Farriin weyn, Farxad! Aad baad ugu mahadsantahay ka soo qaybgalkayaga. Qaar ka mid ah warbaahinta cusub waxay gebi ahaanba dhayalsadaan awoodda xiriirka dadweynaha laakiin waxaan ku aragnay iyada oo ficil u ah macaamiisheenna!